Search - Myanmar News LIVE 2017
Myanmar News LIVE 2017
Search...	Search Keyword:	Search
Page 1 of 3	1. မြောက်ပိုင်း အိုင်ယာလန် ငြိမ်းချမ်းရေး IRA ခေါင်းဆောင်Martin McGuinness (၆၆ နှစ်) ကွယ်လွန်	(2017)
မြောက်ပိုင်း အိုင်ယာလန် သီးခြား ခွဲထွက်ရေးအတွက် လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခဲ့တဲ့ IRA ခေါင်းဆောင်ကနေ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူချက် ရရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Sinn Féin နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် Martin McGuinness အတွက် ...	Created on 22 March 2017	2. မောင်တော-ရသေ့တောင် ကော် မရှင် အစီရင်ခံစာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ထံ တင်သွင်း	(2017)
... တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေဟာ ဗဟိုအစိုးရတွေရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပိုင်ခွင့်တွေကို ထ... ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွေမှာ ...	Created on 21 March 2017	3. NLD အစိုးရသက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား စင်္ကာပူမှာ ကျင်းပ	(2017)
... NLD ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းရာတစ်လျှောက် တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေကို NLD ပါတီရဲ့ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဟောပြောကြတာဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာ လူငယ်တွေ... အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားနဲ့ ...	Created on 19 March 2017	4. ဘာသာပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံပွဲ	(2017)
... စက္ကန့် ငြိမ်သက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကို မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ အကြီးအကဲတွေ ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအပါအဝင် ဘာသာပေါင်းစုံက လူဦးရေ ...	Created on 18 March 2017	5. ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာက ဆန္ဒမဲတွေကို ထည့်သွင်းမည် မဟုတ်	(2017)
... ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့သာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်း ...	Created on 18 March 2017	6. နိုင်ငံရေးမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ခွင့်နည်းပါး	(2017)
"ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ အာရှမှာသာမက ကမ္ဘာမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။"FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... "ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ...	Created on 08 March 2017	7. နိုင်ငံရေးပါတီသစ် ထူထောင်မယ့်အပေါ် အမြင်များ	(2017)
မျိုးဆက်အသီးသီးက အရင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စုပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေးပါတီသစ်တခု ထူထောင်ဖို့ လုပ်နေကြတဲ့အပေါ် အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... မျိုးဆက်အသီးသီးက အရင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ...	Created on 07 March 2017	8. အပစ်ရပ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့အားလုံး ၂၁ ပင်လုံညီလာခံမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့ ကချင်အမျိုး	(2017)
... ယောက်နဲ့ ကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၁ ခုတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် ကချင်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် အယောက် ၁၀၀ ကိုလည်း အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကနေ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ...	Created on 19 February 2017	9. မလေးရှားကို မြန်မာ လုပ်သား ပြန်လည်စေလွှတ်ခွင့်ပြုဖို့ MOEAF တင်ပြ	(2017)
... အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မနေ့က တွေ့ဆုံပွဲမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံကို အလုပ်သမားတွေ ပြန်လည်စေလွှတ်နိုင်ဖို့အတွက် မလေးရှားရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ ...	Created on 19 February 2017	10. နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်း	(2017)
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေအတွက် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ ၅ ခုကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ...	Created on 17 February 2017	11. “ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအတွက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြ	(2017)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/announcements/2017/02/15/id-11743 Created on 15 February 2017	12. အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ	(2017)
ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၇ - အမေရိကန်သမ္မတသစ် Donald Trump တက်လာပြီးနောက် တွေ့ရှိရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို ့ဖြစ်တဲ့ Call the shots, Pull the plug နဲ့ Out of the picture တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 07 February 2017	13. ချင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမျိုး အလိုက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ မကျင်းပသေး	(2017)
လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ မကျင်းပသေးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ ဒီနေ့ နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ...	Created on 06 February 2017	14. VOA နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်း - လုံခြုံရေး နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး	(2017)
... VOA နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း က စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။Authors: ဗီအိုအေ... ဖေဖေါ်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇ - ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ မီးမောင်းထိုးပြသလို ဖြစ်နေတဲ့ အားနည်းချက်တွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ...	Created on 06 February 2017	15. ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဆင့် နိုင် ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဟိုပုန်းမြို့မှာ ၅ ရက်ကြာ ကျင်းပမည်	(2017)
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက် နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပုန်းမြို့မှာ ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ PNLO ဥက္ကဌ ...	Created on 05 February 2017	16. ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတစ်ဦး ကွယ်လွန်	(2017)
... တင်သွင်းရမယ့်ရက် နောက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၄ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလောင်း စုစုပေါင်း ၉၅ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ...	Created on 05 February 2017	17. ဦးကိုနီသတ်မှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကို ထိခိုက်ဟု ကန်သတင်း စာရေးသား	(2017)
... ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးအတွက် ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ ဦးကိုနီကို သတ်ဖြတ်မှုဟာမြန်မာ့သမိုင်းမှာ အထင်ကရဖြစ်စေမယ့် နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုဖြစ်ကြောင်း၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစ ... ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုဟာ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကို ...	Created on 04 February 2017	18. အမေရိကန်သံအမတ်နဲ့ ANP ပါတီခေါင်းဆောင််တွေ ဆွေးနွေး	(2017)
... က မနေ့က သံအမတ်ကြီး နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောပါတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel တို့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ...	Created on 02 February 2017	19. မြန်မာပြည် လွတ်လပ်မှု တဆင့်တက်ဟု Freedom House ဖေါ်ပြ	(2017)
... ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ တခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတချို့မှာ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေးဝါဒီတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အားကောင်းလာတာတွေ့ရပြီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာတော့ ...	Created on 01 February 2017	20. တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံ မြန်မာ့အရေးပါဝင်	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ သံအမတ်နဲ့ သမ္မတ လူယုံ တို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုက အခုချိန်ထိ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီကိစ္စတွေက တဖြေးဖြေးနဲ့ ပေါ်လာတာပေါ့လေFG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... မြန်မာနိုင်ငံမှာ ...	Created on 01 February 2017	StartPrev123NextEnd
ဆိုလာ ကားလမ်းများ	You are here: mm.myanmars.net
ကျားခဲနှင့် အကြည်ဘန်းကျေးရွာတို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွား =================...
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရေးပေါ်အသက်ကယ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အသက်ကယ်ကားနှင့် အလှူရှင်များအား...
ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည့် ရေယာဉ်များ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြေ...
ရေလွှမ်းမိုးမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရေးမော်ကျွန်း - ဖိုးခမှီဒေါင့် ရေကျော်ပတ်တာ တိုးမြှင်...
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အရာတော်မြို့နယ်၌ မိုးစပါးဧက ၃၁၁၅ဝ စိုက်ပျိုးမည် =========...
စက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းရေး သမဝါယမကဖြည့်ဆည်းပေး ===================================...
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မြန်အောင်ဘဏ်ခွဲ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ စတင်ထ...
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် တရုတ်တပ်မတော်က ကျည်အစစ်အသုံးပြု၍ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေ့ကျင့်ခန်း	Sidebar